Dharka gabadha WP-3223
Qaabka Maya.: WP-3223
Midabka: Caddaan / Badda
Dhar: 95% cudbi 5% spandex hal maaliyad ah, 160gsm + 100% xarig caag ah; Qolof hoose: 100% mesh polyester, dahaarka hoose: 95% suuf 5% spandex hal maaliyad, 160gsm oo leh daabacaadda oo dhan
Qalab: Sequin, Dheeman
Feature: Dahaarka balastarka / daabacaadda daabacan, Mesh qaansada oo leh dheeman gacanta lagu tolo
Faallooyin: Xarkaha shalash ee jirka hore, mesh xasiloon oo qarka ceeriin ku leh dhexda
Dharka gabadha XGR-155
Qaab No.: XGR-155 Midab: Xaddiga Cabbirka Caddaan: 4-12A Dharka: Shell: 100% cudbi ah dhar tolmo wanaagsan leh; Dahaarka: 100% cudbi tolmo ah 90 × 88 Qalabka lagu dhejiyo: Shalash, Siibil aan la arki karin Faallooyinka: Dawaarka leh tassels, Sleeve leh xargaha suufka ah, Cajaladda dhejiska ee hoose
Dharka gabadha WW-15
Qaabka Maya. WW-15
Midab: Lt. buluug
Dhar: Shell: 100% xarig caag ah; Dahaarka: 100% cudbi tolmo wanaagsan 90x88
Qalabka: Cajalad ku duuban dhinacyada dhinacyada qalinka, Jiinyeerka aan la arki karin
Faallooyin: Qaansada cajalad duudduuban oo leh dhinacyada qalinka xagga hore
Dharka gabadha WP-3095
Dharka gabadha WP-3006
Dharka gabadha WP-3004
Qaabka Maya qaanso dhar
Dharka gabadha LY-609
Style No.: LY-609 Color: Pink / Gray Size Range: 1-5A Fabric: 95% suuf 5% spandex hal maaliyada ah, 160gsm; Qolof hoose: 100% mesh polyester ah oo leh silsilado, dahaadhka hoose: 100% cudbi tolmo wanaagsan leh oo dhogor 90 Access 88 Gargaarka: Sequin Hadalada: Daabacaadda meelaynta, daabac daabac leh
Dhar gacmo-gashi ah oo aan gacmo lahayn / WP-C1008
Qalab: Bilic laastik ah, Faallo Pearl: Chiffon on qolof hoose leh ubax Qaybta sare ee casaanka ah ee dharkan gacmo la'aanta ah waa suuf leh spandex, oo xiran raaxo leh oo neefsan kara, oo aan ka baqayn cimilada cimilada xagaaga. Qaabka Neckline waa mid qafiif ah, qafiif ah oo deeqsi ah. Dhinaca hore waxaa lagu sharraxay luul iyo ubaxyo yaryar oo la mid ah goonnada hoose ee noolaha, dhammaantood waa macaan oo deeqsi ah. Dhejiska dhexda ayaa lagu xoqay silsilad laastik ah oo lacag ah, taas oo ah mid wanaagsan ...